हातमा पैसा टिक्दैन ? यी ९ तरिकाबाट मालामाल हुनुहोस्
scheduleशुक्रवार फाल्गुन १६ गते, २०७६
धन कमाउनुको मुख्य उद्देश्य खर्च गर्नु नै हो । तर आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गर्नु जीवनको लागि हानिकारक हुनजान्छ । आफूले कमाउनुको धनलाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने जीवन सुखमय हुन्छ । तपाईंको हातमा पैसा टिकाउने अचुक उपाय यस्ता छन् ।
१) तपाईंको कमाई कम तर खर्च ज्यादा हुन्छ भने तपाईंलाई महिनाको अन्त्यमा साथीबाट ऋण लिने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले आफ्नो खर्चको मनिटरिङ गर्न सुरु गर्नुहोस् । तपाईं आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्च गर्नुहोस् ।
२) जुन चिज तपाईं चहानुहुन्छ, त्यसको लिस्ट बनाउनुहोस् । यस प्रकारले तपाईंको खर्च म्यानेज गर्न सहयोग पुग्छ ।
३) कुनै पनि नयाँ कामको शूरुवात गर्नको लागि धनको जरुरत पर्छ तर तपाईं अक्सर राम्रो महुर्तको आसमा काम शूरु गर्नुहोस् । यसो गर्नुभएन भने तपाईंको काम अड्काउन सक्छ, वा पैसा पनि धेरै खर्च हुनसक्छ । त्यसैले आफूसँग पैसा हुनेबित्तिकै तपाईं लगानी गर्नुहोस् ।
४) एक अर्कालाई देखाउनको लागि वा आकर्षक देखिने प्रयोजनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न पाउनुभएन भने वा सुविधा सम्पन्न जीवन जिउनको लागि तपाईंले कर्जा लिने आदतबाट बच्नुहोस् । घर वा बच्चाको पढाईको लागि कर्जा लिनुभयो भने उचित हुन्छ ।
५) कयौं व्यक्तिहरु बिना जानकारी शेयरबजारमा पैसा लगानी गर्छन् । यसले उसलाई नोक्सानको समेत बेहोर्नुपर्छ । तपार्ईं पनि बिना जानकारी यसरी पैसा खर्च नगर्नुहोस् । यो कदापी लगानी हुन सक्दैन । यो बाट बाच्नुहोस् ।
६) यो पक्कै गर्नुहोस् हरेक महिना कमाउनुभएको धनका केही रकमको हिस्सा बचत गर्नुहास् । कोशिस गरेपछि तपाईंलाई बचत गर्ने बानी बस्नेछ ।
७) तपाईं व्यापारमा हुनुहुन्छ भने रिक्स लिन नडराउनुहोस् । कुनै समय रिक्स नलिनुपनि रिक्स साबित हुन सक्छ । त्यसैले परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्नुहोस् र तपाईंलाई लगानी गर्न ढुक्क बनाउनेछ ।
८) क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो बिलको ड्यु मिति भन्दा पछि तिर्नुहुन्छ भने यो आदतबाट बच्नुहोस् । समयमा ड्यू तिर्नु र फजुुल खर्च गर्नबाट बच्नुहोस् ।
९) चुरोट, राक्सी या अन्य नसालु पदार्थ सेवनको लत छ भने जरुर पैसा खर्च हुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ । त्यसैले नशालु पदार्थमा पैसा खर्च गर्नको सट्टा बचत गर्नुहोस् । जुन तपाईंको भविष्यको आवश्यकतामा काम आउनेछ ।
दुब्ला-पातला मानिसले यस्ता कपडा पहिरिनु पर्छ
राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न ‘आई लभ यु’ होइन भन्नुहोस् यी ७ कुरा
दाँतमा सिमेन्ट भरेपछि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
एक ‘वेश्या’ले बनाएकी थिइन् विवेकानन्दलाई असल सन्यासी
गैर इस्लामिक मानिने योगालाई साउदी अरबले यसरी अंगाल्दैछ
चिनियाँ फिल्मको झल्को दिने यस्तो छ चीनको एउटा जीवन्त गाउँ
चौलानीले घटाउँछ बढ्दो उमेरको प्रभाव, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
जीवन शैली, मुख्य समाचार, साझापोस्ट सिफारिस
७७ सालमा विवाहका लगन १८ मात्रैः माघ र फागुनमा साइतै छैन, यस्तो छ कारण
बानेश्वरमा बेहुली कुराएका ‘बेहुला’ पक्राउ
काठमाडाैं, १५ फागुन । राजधानीमा आयोजित एउटा विवाहमा दुलाहा नआएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित...
चीनमा २ महिनाभित्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुने, उपचारपछि ३२ हजार मानिस निको भए
एजेन्सी, १५ फागुन । गत डिसेम्बरमा पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरस हाल विश्वभर फैलिइरहेको छ । कोभिड-१९ पनि...
कोरोना भाइरसबारे जानकारी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था
एजेन्सी, १५ फागुन । कोभिड-१९ पनि भनिने कोरोना भाइरसबाट चीनमा २७ सय ४४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । ‍ नयाँ भाइरसबाट चीनमा ७८ हजार...
गोकुलको बचाऊ गर्दै ओलीले भने- हामी भ्रष्टाचार दूरबिन लगाएर हेरिरहेका छौं
काठमाडौं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी प्रशिक्षणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री...
लिगका खेल विदेशमा खेलाउन नपाइने
काठमाडौँ, १६ फाल्गुन । फिफाले लिग खेल विदेशमा गर्न नपाउने नियम बनाएको छ । अब घरेलु लिगका खेल आफ्नै देशमा हुनुपर्नेछ । मिडिया...
कस्तो छ दुर्घटनामा परेका मैनालीको अवस्था ?
काठमाडाैै, १५ फागुन । सवारी दुर्घटनामा परी घाइते हुनुभएका नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ ।...
उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट जस्तापाता खसेपछि स्थानीय नागरिक त्रसित
काठमाडौँ, १६ फाल्गुन । उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट जस्तापाता खसेपछि स्थानीय नागरिक त्रसित बनेका छन् । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१...
चीनमा कोरोना भाइरसका कारण २७८८ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ, १६ फाल्गुन । चीनमा कोरोना भाइरसका कारण २७८८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितहरुको संख्या ७८ हजार ८३२ रहेको...